Ilhaan Cumar oo noqotey xildhibaankii ugu lacag badnaa dhinaca ololaha doorashada 2020 - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ilhaan Cumar oo noqotey xildhibaankii ugu lacag badnaa dhinaca ololaha doorashada 2020
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo xagjir Taram sudhey sawirkeeda iyo holaca weerarkii 2001 ayaa ololaha doorashada 2020 soo xeraysay muddada sadexda bilood ee sanadkan lacag gaaraysa sideed boqol oo kun taas oo aan farxad gelinayn xagjir Taram.
Ilhaan oo xagjirada taageera Taram iyo Yuhuudu rabaan inay hurdada u diideen ayagoo isku dayaaya inay sharafta ka dilaan madaama ay Muslim tahay xijaabna qabto ayaad ka dareemaysaa taageerada ay ku heshay weeraradaas joogtada ah.
Gobolka laga soo doorto Ilhaan Cumar oo ah mid amni u ah xisbiga Dimoqraadiga gaar ahaan qaybteeda ayaa haddana xisbiyada kale rabaan inay ka xayuubiyaan taas oo adag ilaa hadda.
Isniintii ayay ahayd markii banaanbax lagu diidan yahay xagjir Taram uu ka dhacay Minasoota oo u booqasho ku tagey. Xisbigeeda madaxda sare qaarkood sida afhayeenka barlamaanka haweenayda lagu magacaabo Nancy ayaa lagu eedeeyay inayna si xooga u difaacin Ilhaan.
Si kataba ha ahaatee lacagtaan ololaha doorashada 2020 ayaa muujinaya in Ilhaan ku soo bixi doonto tiro intii hore ka badan.